Fannaanka weyn Axmadeey Abuubakar Al Camaari oo Muqdisho ku geeriyooday | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Fannaanka weyn Axmadeey Abuubakar Al Camaari oo Muqdisho ku geeriyooday
Fannaanka weyn Axmadeey Abuubakar Al Camaari oo Muqdisho ku geeriyooday
Allaha u naxariisto Axmadeey Abuubakar Mubaarak (Al Camaari)
Muqdisho (Halqaran.com) – Allaha u naxariistee waxaa maanta Magaalada Muqdisho ku geeriyooday fannaankii weynaa ee Soomaaliyeed, Axmadeey Abuubakar Mubaarak (Al Camaari), oo muddooyinkii ugu dambeysay ku xanuunsanaa Magaalada Muqdisho.
Hobolka ayaa ku geeriyooday hoygii uu ka deganaa Degmada Shibis ee Waqooyiga Magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen eheladiisa.
Axmadeey Abuubakar Mubaarak ayaa wuxuu ka tirsanaa Fanaaniintii Qaranka ee Hobolada Waaberi, wixii ka dambeeyay xilligii burburka ayuu ku noollaa dalka Yemen, waxaana uu dalka dib ugu soo laabtay 2015-kii, markii ay dagaalada ka bilowdeen dalkaasi.
Waxaa la sheegay in markii uu qaxootiga ku galay dalka Yemen, horaantii sagaashamaadkii uu ka towbad keenay fanka. Mudadaasi uu dalkaasi ku noollaa ayuu ka adami jiray Masaajid.
Sidoo kale xilligii berri samaadka ayaa la sheegay inuu heesaha qaadi jiray isagoo araga la’, sanadihii ugu dambeeyay-na uu ku darsaday maqal la’aan, sida ay xaqiijisay Xaali Cismaan Faarax oo ka mid ah hablihii ay berri samaadkii soo wada shaqeeyeen Axmadeey Abuubakar.
Faadumo Cali Jaamac (Nakruuma) oo ka mid ah Fannaaniintii Hobolada Waaberi ayaa waxay sheegtay inay aad uga xun tahay dayaca uu Axmadeey Abuubakar ugu geeriyooday Magaalada Muqdisho.
“Waxaan ka xumay oo aan aad uga xumahay siduu ku dhintay Axmadeey Abuubakar, Ilaahay maalintaas uu dhintay ma dhaafeen, laakiin xannaanadii uu xagayaga naga helin ayaan ka xumahay, maxaa yeelay qof markuu dhinto lee ooynaa, marka nool yahay uma ooyno.” Ayay tiri Nakruuma oo ka hadashay VOA.
Xaali Cismaan Faarax oo iyana la hadashay Laanta afka Somaliga ee VOA ayaa xustay in Al Camaari uu u geeriyooday daryeel la’aan, dowladdiina ay ka gaabisay doorkii kaga aadanaa daryeelka iyo ka warqabka Fannaaniinta.
Waxay sheegtay ka hor intii aanu geeriyoon inay xaaladiisa la socod-siiyeen Wasaaradda Warfaafinta iyo dadka Soomaaliyeedba, balse aanay jirin cid u soo gurmatay, iyadoo intaa ku dartay in nafaqo darro uu ugu geeriyooday Caasimadda Muqdisho.
Maxamed Xasan Barrow oo ka tirsanaa Hobolada Waaberi, lana hadlay BBC ayaa sheegay in Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ay iminka diyaarineyso aaska Axmadeey Abuubakar, oo sida uu sheegay ka dhici doono Magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee Al Camaari ayaa si weyn uga dhex muuqday Golaha Murtida iyo Madadaalada (National Theatre), xilligii berri samaadka, waxaana uu wax ka jilay riwaayado. Heesaha hirgalay ee dadka ku xusuustaan ayaa waxaa ka mid ah Qaahira, Luul iyo Leyla, Hello, Webigii Jaceylka iyo kuwo kaloo badan.
Axmadeey Abuubakar Mubaarak Al Camaari oo geeriyooday
Faadumo Cali Jaamac Nakruuma
Fanaan Al Camaari oo dhintay
Fanaaniintii Qaranka ee Hobolada Waaberi